I-125 IITATTOOS ZOKHAKHAYI EZIBALASELEYO ZAMADODA: UYILO OLUPHOLILEYO + IMIBONO (ISIKHOKELO SIKA-2021) - IITATTOOS
Eyona Iitattoos I-125 Eyona Tattoos yoKhakhayi yamadoda
I tattoo yokakayi ibonisa enye yezona zinto zibalaseleyo kwaye zinemibono ye tattoo kumakhwenkwe. Iithambo zokhakhayi emadodeni zinokuba zezokwenyani okanye zoyilo njengoko ufuna. Ngelixa…
I tattoo yokakayi ibonisa enye yezona zinto zibalaseleyo kwaye zinemibono ye tattoo kumakhwenkwe. Iithambo zokhakhayi emadodeni zinokuba zezokwenyani okanye zoyilo njengoko ufuna. Kwaye ngelixa uyilo lwekhakhayi luyathandwa ngendlela emangalisayo, olu hlobo lomsebenzi wobugcisa luhlala lungaqondwa. Nangona ukakayi lunokufuzisela ukufa nentshabalalo, zininzi ezinye iintsingiselo. Ngapha koko, ii-tattoos zokhakhayi ezipholileyo zinokubonisa izinto ezahlukeneyo kuxhomekeke kwiindidi zemifanekiso ebonisiweyo kunye nesimbo.
Umzekelo, i-tattoo skull tattoo, aka skull skull, ifanekisela umphefumlo wabathandekayo abalahlekileyo kwaye ubhiyozela ubomi basemva kwexesha njengerhafu kula malungu osapho. Nangona abafana bekhetha ukufumana i-tattoo yamakhosi emveli, ezona zimvo zibalaseleyo zihlala zinqabile, zinentsingiselo kwaye ziyakhuthaza. Khawukhumbule nje ukuba i-tattoo elula, encinci yekhanda ibonakala ngathi i-badass njengento eyoyikisayo, ukutshaya okanye ukutshisa i-tattoo ye-skull tattoo. Kungenxa yoko le nto ukakayi kunye ne tattoo zisoloko ziyintandokazi.
Ke nokuba ufuna ukakayi ingalo , isandla , ingalo , igxalaba, umkhono , umlenze , isifuba , umva , Intloko okanye itattoo yesihlahla, zininzi izinto ezotyiweyo zokhakhayi eziza kukhethwa kuzo. Nazi ezona tattoos zokhakhayi ezokukhuthaza ngezimvo zoyilo!
1Iingcamango zeTattoo zoKhakhayi ezipholileyo
MbiniUyilo lweTattoo elungileyo
Iingcamango zeTattoo zoKhakhayi ezipholileyo
Iithambo zokhakhayi zenzela ubugcisa bomzimba obothusayo kuba zinokudityaniswa kunye nazo zonke iintlobo zezinye iikhonsepthi, imizekeliso kunye nemifanekiso. Abafana banokukhetha i tattoo yokakayi eneebhabhathane, umnqamlezo , iwotshi, ukhozi, isithsaba, amadangatye, iintsimbi ezinqamlezileyo, amaphiko, iintyatyambo , iintliziyo, iidemon, abaphangi, iintyatyambo, izilwanyana, amathambo, okanye iinkwenkwezi.
Ekugqibeleni, ii-tattoo zokhakhayi azenzelwanga ukuba zibukeke okanye zoyikise. Ukuba ucinga ngokufa njengenxalenye yobomi engenakuphepheka, intsingiselo yoyilo olwahlukileyo iyacaca.
Kwiimeko ezininzi, amadoda aneemvambo zokhakhayi ezinemvukelo nezisoyikisayo ziye zamkela imeko yazo yokufa kwaye ziyaqonda ukuba ukuphila yinto yexeshana. Ngapha koko, kwezinye inkcubeko, ukhakhayi lunokufuzisela ubomi.
Usuku lwabafileyo ngumthendeleko waminyaka yonke eMexico apho iishukela zeshukela kunye nezinye iimpawu zisetyenziselwa ukukhumbula nokuhlonipha abafileyo, okwenza i-tattoo ye-skull tattoo indlela yokukhumbula abathandekayo.
Ukudibanisa ukakayi kunye nomfanekiso omele ubomi kunokwenza i-tattoo enentsingiselo eya kuthi isebenze njengesiqwengana sencoko ubomi bakho bonke. Omnye umzekelo omangalisayo lukakayi kunye neengelosi zamaphiko tattoo ukumela ubomi obungunaphakade emva kokufa.
Ukhakhayi kunye ne-tattoo yenyani yenye indibaniselwano ehambelanayo emele ubomi kunye nokufa ngendlela eyahlukileyo ngokuchaseneyo nobuhle nombala weentyatyambo ngokuchasene nokubola kokhakhayi. Isimboli esifanayo sobabini sisetyenziswa kwisiqingatha sethambo.
Amadoda anomdla kubaphangi banokukhetha uhlobo lwabo lweJolly Roger, okanye ukakayi kunye ne-crossbones tattoo. Nanamhlanje, iJolly Roger okanye ukhakhayi kunye nomfanekiso wamathambo unokufumaneka kwiimveliso ezaziwa ngokuba zinetyhefu okanye zibonakalisa njengophawu lwesilumkiso.
Ngelixa uninzi lweempawu zokonyiwa kwamakhakhayi emadodeni zimnyama, zingwevu kwaye zimhlophe, kunokwenzeka ukubandakanya umbala ngeendlela ezimbalwa ezahlukeneyo. Ngokwesiqhelo, ii-tattoos zokhakhayi ezimibalabala ziimpawu eziqhelekileyo zokhakhayi lweelekese, kodwa imibala eqaqambileyo inokwenza nabuphi na ubugcisa bomzimba bukhangeleke kutsha kwaye buhle.
Okokugqibela, yintoni eyenza ukuba iingcinga ze-skull tattoo zithandwe kakhulu kukuba ezi zoyilo azikhawulelwanga kwilungu elinye lomzimba. Uyilo lweKhakhayi lubhetyebhetye ngokwaneleyo ukuba lungene kwingalo, ngasemva, esifubeni, engalweni, ethangeni okanye kumkhono we tattoo. Ngokufanayo, abafana banokuhlala befumana i- intamo , isihlahla okanye isandla tattoo yokakayi ukuba bafuna iqhekeza elincinci.
Uyilo lweTattoo elungileyo
Ukusuka kwi-3D uyilo lwesizwe, jonga ezi tattoos zokhakhayi emadodeni. Ngemibono emininzi yoyilo lwe-badass skull ukuyifumana, siqinisekile ukuba uyakufumana umbono owoyikekayo nowahlukileyo kwi-inki emzimbeni wakho!
izitayela zokucheba iinwele zabantwana
iimveliso ezilungileyo zeenwele ezigobileyo zamadoda
ilanga inyanga inyuka
Ukuphola kukaOdell Beckham Jr